MADAXWEYNIHII KHAYRKA LAHAA WAA KAASE LASHAQEEYA. • Oodweynenews.com Oodweyne News
MADAXWEYNIHII KHAYRKA LAHAA WAA KAASE LASHAQEEYA.
Kolay Dad badan baa yaabidoona laakiin Anigaa qancinaaya.
Waxaynu ognahay marka lagujiro Olole doorasho Xisbiyada iyo musharaxiintu way is duraan Ama way is cambaareeyaan siyaasad ahaan iyo Aqoon ahaanba, bulshaduna waxay figradahooda iyo ciday taageersanyiin ku soobandhigaan baraha laysku Arko, makhaayadaha iyo marfashyadana way ku murmaan iyadoo qoloba xisbi iyo musharax wadato marka laysku xiiqana waalakalatagaa.
Hadaba waxa jirta meel laysuguyimado marka laysku xiiqo, dadku markay isku daalaan waxay isugu imanjireen kalmad duco ah Oo Aanay jirin meeloodhaafaa, waxay Odhanjireen ilaahayow Anagu waxba garanmaynee kii noo khayr badan noodoor gabagabada murankuna halkaasuu kudhamaanjiray.
Hadaba miyaanu muuse biixi ahayn kii khayrka lahaa Ee ilaahay lawaydiistay inuu udooro, yaa odhankara ducadeenii ilaahay muu Aqbalin, Yaase beeninaaya Arintan Ama odhanaaya bulshadu may odhanjirin ILAAHAYOW kii khayr nooleh Noodoor.
Waar halala shaqeeyo madaxweynihii kharka lahaa Ee ilaahay lawaydiistay muuse biixi buu noqdaye.
Imisaanu duraynay malacag baanu kulahayn, mise geel buu igadhacay waxan Arkay dadkii baraha bulshada Aanu isku Arka jirnay Oo intoodii badnayd xaska dabada galiyeen, ileen dadkuba inta yar Ee Ololaha lagujiro Ayuunbay mucaarad yihiin Naw.